Semalt: Ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny hosoka sy ny mpampiasa aterineto
Ny hosoka amin'ny Internet dia fampiasana tsy ara-dalàna ny rindrambaiko na serivisy aterineto mba hanararaotrany fananan'ny olona iray. Isan-taona, an-tapitrisany dolara tapitrisa dolara no nangalatra tamin'ny alàlan'ny tranokala Internet, mailaka, ary zavatra hafa mitovy amin'izany. maroIreo hackers avo lenta dia mampiasa ny anaran'ireo mpivarotra vaoavao mba hamandrika ireo niharam-boina ary haka ny volany amin'ny aterineto - debica farah. Miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana,Ny hosoka amin'ny aterineto dia nanjary fiahiana lehibe ho an'ny sivily sy ny masoivohon'ny lalàna.
Ross Barber, ny Semalt Customer Success Manager, dia manome fampahalalana lehibe momba ity karazana asa ratsy ity.
Ahoana no hiarovanao ny tenanao
Azo atao ny miaro tena ao amin'ny tranonkala raha fantatrao ny zavatra rehetra momba ireo karazanany hosoka amin'ny aterineto. Ny fanangonana karatra famoaham-bola, ny mailaka tsy fantatra, ny loteries, ny tranonkala tsy mendrika sy ny vata-bola sandoka no karazanaonline scams. Tsy misy fitsipika napetraka mba hialana amin'ny Internet; Na izany aza, afaka miaro ny tenanao ianao amin'ny fitazonana ny antsipirian'ny karatry ny carte de crédit.Zava-dehibe koa ny tsy hikirakirana ny zavatra tsy fantatra ary tsy mizara ny anaranao na ny tenimiafina miaraka amin'ny antoko fahatelo.
Inona no hatao raha lasa niharam-boina ianao
Mihamitombo ny isan'ireo onjam-peo an-tserasera amin'izao andro izao, noho izany dia zava-dehibe ho anao izanymitadidy zavatra vitsivitsy:
1. Valio fotsiny ny mailaka izay avy amin'ny ID tena izy. Raha ny ordinateranao spam diaRaha sendra mailaka marobe marobe ianao dia tokony hamafa azy ireo faran'izay haingana.
2. Tokony hitadidy fa tsy misy asa tena ilàna saram-pianarana, anisan'izany ny saram-pitsaboana visa,ny saram-pitsaboana, ary ny fiampangana ara-panjakana..Raha misy olona manolotra asa ho anao ary te-handoa saram-pandraharahana ianao, dia misy ny mety ho izymanandrana mandoka anao.
3. Tsy tokony ho tratran'ny olona iray milaza fa nahazo loka ianao. Tsy misyzavatra toy izany amin'ny aterineto, noho izany dia ny hackers ihany no manintona anao hisintona anao sy hangalatra ny volanao.
Ny fomba hahazoanao vola indray
Ny lalàna Cyber ​​dia manolotra loharano ara-dalàna sy fomba hanangonam-bola. Raha toa ianaoizay tratry ny aretina toy izany, dia azonao atao ny mifandray amin'ny Centre Criminal Complaint Internet. Manaova fitarainana amin'ireto orinasa ireto, ary hanaraka ny IP izy ireoadiresy izay nangalarina ny volanao.
Azonao atao koa ny mandefa taratasy fangatahana fanavakavahana amin'ny mpanjifa amin'ny bankinao mba ahafahana misimisy kokoaMivadika ny raharaham-barotra. Noho izany, mila mifandray amin'ny sampana bankinao akaiky ianao ary manome azy ireo ny antsipiriany rehetra. Mety mbola hihatra ny fitsaranaMitadiava ny fitarainanao amin'ny fitarainanao, ary heno ny raharaha ary alao isaky ny sivy volana sy iraika ambin'ny folo.
Karazana hosoka amin'ny aterineto
Ireto misy sasantsasany amin'ireo karazana fandikàn'ny aterineto izay fampiharana ny lalàna sy ny fanaraha-masoNy manampahefana sy ny fikambanana mpanjifa dia mahita
Loka sy varotra antserasera
7) Miseho matetika amin'ny teti-bola an-tserasera ny fisian'ny hosoka manintona olona maro.Ny Hackers dia manandrana manangona ny volanao amin'ny alalan'ireo tetika ireo amin'ny fanomezana anao vola be na fitsidihana any amin'ny firenen-kafa.
Raha misy olona mifandray anao amin'ny alàlan'ny mailaka ary manolotra tombontsoa ara-barotra, dia misy ny lanjanyfa mitady hamandrika anao izy. Tsy afaka atolotra mihitsy ny fahafaha-manao fandraharahana amin'ny alalan'ny alàlan'ny mailaka manokana.
Ny tetikady sasantsasany amin'ny aterineto sasany dia ahitana ny halatra amin'ny maha-olona - ny tsy fahazoana sy ny fampiasana azyny angon-drakitrao manokana amin'ny fomba iray mitaky fitaka na hosoka.